December 2014 - Page3of3- BuzzFeed Myanmar
အမျိုးသမီးများတွင် လည်ပင်းအကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု ပိုများလာ
အစားအသောက်နှင့် လူနေမှုဘ၀ပုံစံ ပြောင်းလဲလာမှုကြောင့် မျိုးပွားနိုင်သောအရွယ် အမျိုးသမီးများ၌ လည်ပင်းအကျိတ်ကင်ဆာရောဂါ ပိုမိုအဖြစ်များလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၏ မှတ်တမ်းများအရ အသက်(၂၀)နှစ်မှ (၅၀)နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများ၌ လည်ပင်းထဲ မှ ဟော်မုန်းထွက်သော ရောဂါနှင့် လည်ပင်းအကျိတ် (သိုင်းရွုက်) ကင်ဆာများ လာရောက်ကုသမှုမှာ တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူဦးရေ ၁၅၀ မှ ၂၀၀ ၀န်းကျင်ကြား ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ‘‘မျိုးပွားနိုင်တဲ့အရွယ် အမျိုးသမီးတွေ ပိုအဖြစ်များတယ်။ အစားအသောက် အနေအထိုင်တွေကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ လည်ပင်းကင်ဆာတွေလည်း အချိုးကျပြီး များပြားလာတယ်။ အခုက ပိုသိသာလာတယ်’’ဟု ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ကုသရေးဌာနမှ ပါမောက္ခဒေါက်တာကျင်မြင့်ကပြောသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကင်ဆာအဖြစ်များဆုံး နိုင်ငံများအနက် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒုတိယအဆင့်တွင်ရှိနေကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ လည်ပင်းအကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားပါက […]
(၁) ဝိတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ (၂) အသည်းရောဂါများ အတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ (၃) ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (၄) နာ မကျန်းဖြစ်ခြင်းအတွက်လည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၅) အသားအရေကိုလည်း ကြည်လင်ဝင်းပ စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၆) ကိုလက်စရောဓာတ်ကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ (၇) ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၈) အရိုးကိုလည်း သန်မာစေနိုင်ပါတယ်။ ကျော်လင်းနိုင် (ရိုးရာလေး)
ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်ကို တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ်ငါးသောင်းနှုန်းဖြင့် လာမည့်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ရောင်းချမည်
ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံအမျိုး အစားကို တစ်ယူနစ်လျှင် ငွေကျပ်ငါးသောင်းဖြင့် ရောင်းချ သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ သိရ သည်။ အဆိုပါ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှု အာမခံအ မျိုး အစားကို မြန်မာ့ အာမခံလုပ်ငန်းမှ လာမည့် နှစ် ဆန်းပိုင်း မှစတင်ကာ ယူနစ်စနစ် ဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး ယင်းအာမခံကို စတင်ရောင်းချရာ၌ တစ်ယူနစ် လျှင် ငွေကျပ်ငါးသောင်း ဖြင့် တစ်ဦးလျှင် အများဆုံး ငါးယူ နစ်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အာမ ခံလုပ်ငန်းမှသိရသည်။ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ဦး ဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေး မင်းသိန်းက ”ကျန်းမာရေးအာမခံ အမျိုးအစား ကို တစ်ယူနစ်ကနေ ငါးယူနစ်ထိ ဝယ်နိုင်တယ်။ သူက တစ်နှစ်အကျုံးဝင်တယ်။ တစ်နှစ် […]
ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး WHO က ငှက်ဖျားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ကမ္ဘာတဝန်း ကြိုးပမ်း ဆောင် ရွက်မှုတွေ ကြောင့် ငှက်ဖျားနဲ့ သေဆုံးရတဲ့ လူအရေ အတွက် တဝက် ကျဆင်းသွား ခဲ့တာဟာ ကြီးမား တဲ့ အောက်မြင်မှု တခုလို့ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အာဖရိကတိုက် ဆာဟာရ သဲကန္တရ တောင်ပိုင်းမှာ ၂၀ဝ၁ ခုကနေ ၂၀၁၃ အတွင်း ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၃ ဒသမ ၉ သန်းအပါအဝင် လူဉီးရေ ၄ ဒသမ ၃ သန်းဟာ သေဘေးက လွတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တနှစ်ထက်တနှစ် ငှက်ဖျားရောဂါဘေးကနေ လွတ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ လူတွေ ပိုပိုပြီးများလာနေ တယ်လို့ WHOက ပြောပါတယ်။ […]
အစာအိမ်အတွက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အစားအစာများ
အစားအသောက် လွန်ကဲစွာ စားသုံးမှုကြောင့် နေမထိထိုင်မသာ ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် အစာအိမ်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး အစာကြေဖို့ လွယ်ကူစေတဲ့ အစားအစာ တချို့ စားသုံးကြည့်ပါ။ ငှက်ပျောသီး ငှက်ပျောသီးဟာ အစာအိမ်အတွက် အစာချေရာမှာ လွယ်ကူစေတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငှက်ပျာသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်က အစာချေစနစ်ကို ချောချောမောမောဖြစ်အောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး ငှက်ပျာသီးတွေမှာ ဝမ်းလျှောခြင်းလျော့နည်းစေနိုင်တဲ့ ပျော်ဝင်မှု ကို အားပေးတဲ့ အမျှင်ဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ လိမ္မ်ာသီးဖျော်ရည် တခါတရံမှာ အစာအိမ်အက်ဆစ်ဆုံးပါးခြင်းကြောင့် အစာမကြေမှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိမ္မ်ာသီးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝအက်ဆစ်က အစာချေဖျက်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ အစာမကြေမှုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိမ္မ်ာသီးဖျော်ရည် သောက်ပေးမယ်ဆိုရင် အစာမစားမီ သောက်ပေးပါ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ ပေါင်းမသောက်လိုက်ပါနဲ့။ ဂက်စ်တွေပိုများလာပြီး မသက်မသာပိုဖြစ်စေပါလိမ့် မယ်။ ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်ထည့်သုံးပါ […]
ခြေဗလာလမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့ ကောင်း ကျိုး လေး များ
ကျောက်စရစ် ခဲလုံးလေးတွေပေါ် ဖိနပ်မပါဘဲလမ်းလျှောက် နေတာကိုမြင်ဖူးကြမှာပါ။ မြေပြန့်ပေါ်မလျှောက်ဘဲ ဘာ့ကြောင့် တကူးတက ခဲလုံး ပေါ် လမ်းလျှောက်ကြရတာလဲ? ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ဘာ့ကြောင့် ခက်ခက်ခဲခဲ လမ်းလျှောက်ကြရတာလဲ? (၁) သွေးကျစေပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ သွေးတိုးရောဂါရှိသူ သက်ကြီး ရွယ်အိုများကို ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် သုံးနာရီဖြင့် အချိန် ကာလလေးလကြာမျှ ကျောက်စရစ်ခဲတွေပေါ် ခြေဗလာ ဖြင့်လမ်းလျှောက်စေခဲ့ရာ သိသိသာ သာ သွေးတိုးကျသွား ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါသည်များ အဲဒီလို လျှောက်ပေး ခြင်းက မြေပြင် ညီပေါ်ဖိနပ် စီး၍ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်း ထက် ပိုမိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်လို့ ၂ဝဝ၅ခုနှစ်ထုတ် The American Geriatrics Society (ခေါ်)အမေရိကန် သက်ကြီးရွယ်အို လူ့ဘောင်အဖွဲ့လို့အမည်ရတဲ့ဂျာနယ်တစ်စောင် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ (၂) အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းလာစေပါတယ် အာရုံစူးစိုက်ပြီးခြေလှမ်းတိုင်းကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့ […]
ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်အောင်မြင်
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန် ဆေးတက္ကသိုလ် မှ သုတေသီများက ရင်သားကင်ဆာ ကို ကာကွယ် နိုင်ရန် အတွက် ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးကို လူပေါ်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ၄င်းတို့၏ ကာကွယ်ဆေး ဖော်စပ်ပုံမှာ လူကို အန္တရာယ်ပြု စေခြင်း မရှိဘဲ ဆဲလ်အကျိတ် များကို ဖျက်ဆီးရာ၌ ထိရောက်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ (ပုံ) အမေရိကန်နိုင်ငံ စိန့်လူ့ဝစ်မြို့ ဝါရှင်တန် ဆေးတက္ကသိုလ် မှ သုတေသီ များသည် လူ၏ရောဂါ ခုခံစနစ်မှ ရင်သားကင်ဆာ ကို ထိရောက်စွာ ခုခံစေနိုင်မည့် ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးကို ဖော်စပ် လိုက်ပြီဖြစ်ရာ ဆေးစမ်းသပ်မှု အနည်းငယ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရလဒ်မှာ သုံးစွဲသည့် သူများကို အန္တရာယ်ပြု စေနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ […]
ဆီးချို သွေးချို ကာကွယ်ဖို့ သင်္ဘောသီးစိမ်းရေနွေး နေ့စဉ်သောက်ကြစို့
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းခေတ်စားလာသောဆေးမီးတို( ဆေးနည်းတို )တစ်ခုအကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။ ပုပ္ပားတောင်သို့ဘုရားဖူးသွားရင်းဆီးချိုတက်၍မေ့လဲကျသွားသော အမေသိန်း(နန်းရှေ့ကန်ကောက်သစ် ရွာ) မှဤ နည်းကိုပြောပါသည်။ အမေသိန်းသည်ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများပြပြီးဆေးစားနေသည်မှာ၂နှစ် ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ခါတိုင်းလည်းဆီးချိုတက်လျှင်မူးလဲနေကျဖြစ်ပါသည် ။ ပုပ္ပားတောင်စောင်းတန်းမှအမေကြီးတစ်ဦးမှသူ့ကိုပွေ့ချီထားခိုင်းပြီးသင်္ဘောသီးစိမ်းအဆင်သင့်ကိုခေါင်းပိုင်း မှဖြတ်။အတွင်းမှအစေ့နုများကိုဇွန်းဖြင့်ခြစ်ထုတ်ပြီးနောက်ဆူနေသောရေနွေးအဖြူလောင်းထည့်ပြီးပိတ် ထားပါသည်။၁၅မိနစ်ခန့်ထားပြီးနောက်သွန်ငှဲ့ပြီးအနည်းငယ်အအေးခံ၍တိုက်ပါသည်။ သင်္ဘောသီးကိုလွှင့်မပစ်ရပါရေနွေးပြန်ပြန်ဖြည့်ပြီးတစ်နေကုန်၎ကြိမ်၅ကြိမ်အထိသောက်နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်အမူးရောဂါအမျိုးမျိုးသက်သာသည့်အပြင်သွေးယားရောဂါ။ အိပ်မပျော်သောရောဂါနှင့်အစာ အိမ်ရောဂါအချို့တို့ပါပျောက်ကင်းသူများရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။ အမေသိန်းသည်ဤနည်းကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်တစ်လစွဲစွဲမြဲမြဲသောက်ပြီးနောက်နေ့စဉ်စစ်ဆေးနေသော ဆီချို မှာလုံးဝမတက်တော့ဟုဆိုပါသည်။ ဤနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပုံကိုတင်ပြပေးသူဆရာမဒေါ်ကြည်ကြည်သန်းနှင့် အမေသိန်းတို့ပုံကို တင်ပြထားပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသောနည်းဟုယူဆ၍တင်ပြပါသည်။ စွယ်စုံကျမ်း
အီး-စီးကရက်တွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသော ဓာတ်ပစ္စည်းပါဝင်မှုသည် သာမန်စီးကရက်မှာထက် ၁ဝဆပိုများ
အီး-စီးကရက်မှ ထွက်ပေါ်လာ သည့် (မမြင်ရသော)ရေငွေ့တွင် Formaldehyde(အပုပ်နိုင်သောပစ္စည်း)နှင့် acetaldehyde အပါ အဝင် ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်နေမှု အဆင့်မြင့်မြင့်ရှိနေသည်ကို ဂျပန် နိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူ များက တွေ့ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည် အီး-စီး ကရက်အပေါ်အားထားနေသူများ ကို ထိုးနှက်လိုက်ရာရောက်သွားလေ သည်။ အီး-စီးကရက်သည်သာမန် စီးကရက်များထက် ပို၍ အန္တရာယ် ကင်းသည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထား သည်။ အီး-စီးကရက်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လုံးက ကြိုက်လာသည်။ အထူးသ ဖြင့် လူငယ်များက ပိုကြိုက်သည်။ အီး-စီးကရက်သည် ပူပူနွေးနွေးအ နံ့မွှေးမွှေးအရည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယင်းတွင်လည်း နီကိုတင်းဓာတ်ပါ ဝင်သည်သာဖြစ်သည်။ အီး-စီးကရက် မှာ ရေငွေ့ကို ရှူရသော ဆေးလိပ် ဖြစ်သည်။ ယင်းသည်သာမန်စီး က ရက်နှင့် များစွာတူသည်။ အီး-စီးကရက်မှ […]
ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များ လေ့ကျင့်ခန်းများကို တရားလွန်လုပ်မိပါက ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွား သွားနိုင်
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သောအမူအကျင့်တစ်ခုဖြစ် သော် လည်း ဆီးချိုဝေ ဒနာရှင်များအနေဖြင့်မူ လေ့ကျင့်ခန်းကိုတရားလွန်လုပ်မိပါက ကျန်းမာရေးအခြေ အနေ ပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်ကြောင်း အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုက ပြောကြား လိုက်သည်။ “လမ်းမလျှောက်ခင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ခင်မှာ ကိုယ်နဲ့အ ဆင်ပြေ၊ မပြေကိုအရင်ကြည့်ရမယ်။ ဆီး ချိုသမားတွေအနေနဲ့ ဆီးချိုတွေအရမ်းကျနေရင်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လိုက် ရင် ပိုပြီးတော့ကျ သွားနိုင်တယ်။ ဆီးချိုတက်တာက ၄၀၀၊ ၅၀၀ ကျော်နေရင်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လိုက်ရင် ပို ဆိုးသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်၊ မလုပ် သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်” ဟု ဒေါက်တာ ကိုကိုက ဆိုသည်။ ယင်းအပြင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုဆိုးသွားနိုင်သော ရောဂါများလည်းရှိ သောကြောင့် လေ့ကျင့် ခန်းများကို တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ဆရာဝန်များနှင့်တိုင်ပင်ပြီး မိမိတုိ့ခံနိုင် ရည်ရှိသော လေ့ကျင့်ခန်း များမှစတင်၍ […]